काठमाडौँ / तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या बिग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ ।
अझै अर्काे खुशीको कुरा त के छ भने हराएको या फुटेको मोबाइलबाट ‘डाटा’ या फाइल हराउने छैनन्, सबै भेटिने छन् । किनभने मोबाइल हराउनुअगावै तपाईंको मोबाइलका सबै डाटाहरु त्यो कम्पनीमा सुरक्षित रहेका हुन्छन् । तर तपाईंले आफ्नो मोबाइल किनेको मूल्यको पाँच प्रतिशत रकम भने तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यो रकम तिरेर उक्त कम्पनीमा दर्ता भयो भने सो सेवा पाइन्छ ।
मेरो सुरक्षा नामको सफ्टवेयर कम्पनीले काठमाडौँमा गत हप्तादेखि यो सेवा शुरु गरेको छ । उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम सुनुवार भन्छन् – “हामीले यो सेवा शुरु गरेको हप्तादिनमै हाम्रो एप्स् आठ हजारले ‘डाउनलोड’ गरिसकेका छन् । यस कम्पनीसँग हाल अन्य कर्मचारीका अतिरिक्त १० जना कम्प्युटर इञ्जिनियर र सूचना प्रविधिका विज्ञहरु छन् ।
व्यक्तिको मोबाइलका डाटाहरु भण्डारण गर्ने काम गोपनीयताभित्र पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उक्त कम्पनीका निर्देशक विश्वास अधिकारी भन्छन् ,– “त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो एप्स्मा कसैको कुराकानी भण्डारण हुँदैन र मोबाइल प्रयोगकर्ताले जुनजुन डाटाहरु सुरक्षित राखिदिनु भनेका हुन्छन् त्यो मात्र राख्ने हो ।”
यस्तो खुशी गएको शुक्रबार यो कम्पनीको सदस्य बन्न स्टार मल पुगेका ज्ञानेश्वरका महेश्वर आचार्यले पनि व्यक्त गरे । एउटा महँगो मोबाइल फोन सेट हराउँदा र त्यसपछि किनेको पनि वर्ष दिनपछि पानीमा डुबेकाले त्यसमा रहेका सयौँ फोन नम्बर जम्मा पार्न लागेको दुःख सम्झिँदै उनले भने ,– “यो सेवा पाउँदा निकै खुशी लागेको छ, अब फोन हराए पनि धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।”
मोबाइल हरायो ? चिन्ता छैन, प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस्
भक्तपुर । मध्यपुर थिमि–१ लोकन्थली बस्ने अरविन्द आचार्यको सामसुङ ग्यालेक्सी जे फाइभ मोबाइल सेट सार्वजनिक यातायातमा बालकोटबाट कौशलटार आउने क्रममा हरायो । उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिमा गत मङ्सिर २३
बन्दुकको बीचमा मोबाइलको आनन्द !
भारतीय एक सैनिक गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा तयारीका क्रममा जालन्धरमा मोबाइल चलाउँदै । आगामी २६ जनवरीमा भारतको ७०औँ गणतन्त्र दिवस पर्छ ।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान
दाङमा सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक
तुलसीपुर। के तपाइँ सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने कारवाहीमा पर्नुहोला । प्रदेश नंं ५ को दाङस्थित प्रहरी कार्यालयले सवारी चलाउँदा चालकलाई मोबाइल प्रयोग गर्न रोक